Kitra – «Can 2018»: vonona tanteraka ny Barea hiatrika an’i Sénégal | NewsMada
Kitra – «Can 2018»: vonona tanteraka ny Barea hiatrika an’i Sénégal
Hifantoka etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina avokoa ny sain’ny mpitia fanatanjahantena rehetra, rahampitso alahady, indrindra ireo mpankafy baolina kitra. Hanafika ny Barea ny Lionan’i Teranga Sénégal.
Ora sisa andrasana! Tonga ny fotoana hihaonan’ny Barea de Madagascar sy ny Lionan’i Teranga, avy any Sénégal. Lalao mandroso, hotanterahina rahampitso alahady etsy Mahamasina, hiadiana ny (Can 2019), taranja baolina kitra. Efa samy vonona hiatrika izany ny ekipa roa tonta.
Raha ho an’ny Barea, efa ao tsara avokoa ny fiomanana rehetra, na vatana na saina. Ry zareo Senegaley indray, efa tonga, omaly zoma, ary hitsapa ny kianjaben’i Mahamasina, anio tolakandro.
Marihina fa mpilalao 13 tamin’ireo niatrika ny “Mondial 2018”, natao tany Rosia, no nentin’i Aliou Cissé, mpanazatra, an’i Sénégal. Anisan’ireny i Sadio Mané, lohalaharan’ny Liverpool. Nambaran’ity mpanazatra senegaley ity fa tsy hiaro tena ny Liona avy any Téranga, amin’ity fifandonany amin’ny Barea rahampitso, ity fa handrombaka ny fandresena mihitsy. Na izany aza, naneho ny fahatahorany ihany izy satria hilalao eto amin’ny kianjany ary manoloana ny mpijery azy ny Barea de Madagascar.
Etsy ankilany, tapa-kevitra ny mpilalaon’ny ekipam-pirenena malagasy fa hanome ny heriny rehetra handavoana ny Senegaley. “Marina fa ekipa manana ny toerany eto Afrika i Sénégal ary manana mpilalao mahay sy be traikefa. Raha ara-taratasy, ambony izy ireo, saingy hilalao eto amin’ny taniny ny Barea ary efa niomana hatry ny ela ka tsy matahotra azy ireo”, araka ny nambaran’i Nicolas Dupuis, mpanazatra.
Tsiahivina fa nisaraka ady sahala, 2 no ho 2, ny roa tonta, ny 13 novambra 2015, teo amin’ny kianjaben’i Mahamasina, nandritra ny fifanintsanana ny “Mondial 2018”.